यस परिच्छेदमाः - Hesperian Health Guides
हेस्पेरियन स्वास्थ्य विकि > डाक्टर नभएमाः नयाँ संस्करण > मधुमेह (डायविटिज) > मधुमेहका लागि परिक्षण
रगतमा चिनीको तह रगत वा पिसाव जाँचबाट परिक्षण गर्न सकिन्छ । तर रगत जाँचेपछि मात्रै चिनी वढी छ की छैन यकिन हुन्छ ।
कसको जाँच गरिनुपर्दछ ?
एउटा ब्यक्तिको मधुमेहको जाँच गर्नैपर्छ यदि उनकोः
मधुमेहको लक्षणहरु छ ।
मधुमेह भएको परिवारको सदस्य छ ।
कम्मरको घेरा ठूलो छ र ४० बर्षभन्दा वढी उमेर छ ।
उनलाई उच्च रक्तचाप छ ।
उनको बच्चा (४ के. जी. वा ९ पाउण्ड) जन्मिएको थियो ।
iयुवावस्था भएपनि पहिलो प्रकारको मधुमेहका सम्भावित लक्षणहरु छन् ।
मधुमेह छ की छैन भनेर जान्न रगतको जाँच गरिन्छ । स्वास्थ्य कार्यकर्ताले मधुमेहको परिक्षणका लागि एकभन्दा वढी किसिमको जाँच गर्न सक्दछन् वा जाँचलाई दोहर्याउन सक्दछन् । तपाईंको आहार, जिवनशैली वा औषधीमा गर्नुभएको परिवर्तनका कारणबाट जाँचको परिणाममा कसरी परिवर्तन आउँछ भनी हेर्न केही अन्य जाँच मधुमेहको ब्यवस्थापनका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
रगतको जाँच गर्दा रगतमा चिनीको तह सामान्य छ की, धेरै छ थाहा हुन्छ । यदि रगतमा चिनीको मात्रा वढी छ, तर धेरै माथि छैन भने ब्यक्तिले राम्रो र स्वस्थकर खानेकुराहरु खाएर र वढी शारिरिक ब्यायाम गरेर मधुमेह हुनबाट रोक्न सक्दछ । यस्तो भएमा पनि हरेक २–३ महिनामा रगतको जाँच गराईरहनुपर्छ ।
मधुमेहका लागि २ वटा प्रचलित रगतका जाँचहरु छन् । एउटालाई खालि पेटमा जाँच गर्ने (Fasting Blood Sugar Test) र अर्कोलाई A1C Test भनिन्छ ।
Fasting Blood Sugar (FBS वा FPG) धेरै प्रचलित जाँच हो । यो जाँच प्रायः भोको पेटमा विहान गरिन्छ । केही क्लिनिकहरुले रगतमा चिनीको तहको जाँच औंलाको टु्प्पोबाट लिइएको एक थोपा रगतबाट चिनीको मापन गर्ने ग्लुकोमिटर नामक औजारबाट गर्दछन् । अथवा रगत लिई प्रयोगशालामा पठाउँछन् । जाँच गर्दा यदि mmol/l (मिलिमोल्स प्रति लिटर) मा नापिएमा परिणाम ४ देखि २० बिचको संख्यामा हुनेछ । यदि नाप ६.९ mmol/l वा वढी भएमा मधुमेह हुन सक्दछ । यदि कुनै ठाउँमा mg/dl (मिलिग्राम्स प्रति डेसीलिटर) मा नापिन्छ भने परिणाम ८० र २५० बिचको संख्यामा हुने गर्दछ । यस श्रेणीको मापनमा १२५ mg/dl वा वढी भएका मानिसहरुमा मधुमेह हुन सक्दछ ।
५.६ mmol/l वा १०० mg/l भन्दा कमः रगतमा चिनीको तह ठीक छ ।
५.६ mmol/l वा १०० mg/dl भन्दा वढी तर ६.९ mmol/l वा १२५ mg/dl भन्दा कमः यसले मधुमेह हुन सक्छ भनेर देखाउँछ । स्वस्थ खानपिन र शारिरिक क्रियाकलाप वा व्यायाम गरेर, तौल घटाएर रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
६.९ mmol/l अथवा १२५ mg/dl भन्दा वढीः मधुमेह छ र उपचार चाहिन्छ । जति चिनी वढी भयो, त्यती नै ज्यादा कुनै ब्यक्तिलाई मधुमेह सम्वन्धि जटिलता वा गम्भिर स्वास्थ्य समस्याहरु हुने सम्भावना हुन्छ ।
जाँच औंलाको टुप्पोबाट लिइएको एक थोपा रगतबाट गर्न सकिन्छ । अन्य जाँचका लागि पाखुराबाट १ भाइल रगत लिकालिनेछ । क्लिनिकमा एक दक्ष स्वास्थ्य कार्यकर्ताले यसलाई सुरक्षित तवरले निकाल्छन् ।.
A1C जाँच (ग्लाइकोजाइलेटिड हेमोग्लोविन टेष्ट, HbA1C अथवा HgbA1C पनि भनिन्छ) ले कुनै व्यक्तिको पछिल्लो ३ महिनाहरुको रगतमा चिनीको औषत स्तर देखाउँछ । यो जाँचको लागि व्यक्तिले भोको बस्नुपर्दैन । क्लिनिकले सिरिञ्जबाट रगतको नमुना लिएर प्रयोगशालामा पठाइन्छ । A1C रक्त जाँचको परिणाम प्रतिशत (%) मा हुनेछ सामान्यतया ४ % र १४ % को बिचमा ।
५.७ % भन्न्दा कमः रगतमा चिनीको स्तर ठीक छ ।
यदि ५.७ % भन्न्दा वढी तर ६.४ ५ भन्न्दा कमः यो भएपछि जिवनमा परिवर्तन ल्याए मधुमेह हुनबाट रोक्न सकिन्छ । यदि ६.४ % छ भने स्वस्थ खानपिन र शारिरिक क्रियाकलाप वा व्यायाम गर्नुपर्छ ।
६.४ % भन्दा वढीः तपाईंलाई मधुमेह छ र उपचार चाहिन्छ । प्रतिशत जति वढी छ, त्यती नै ज्यादा कुनै ब्यक्तिलाई मधुमेह सम्वन्धि जटिलता वा गम्भिर स्वास्थ्य समस्याहरु हुने सम्भावना हुन्छ ।
पिसावको जाँचले पनि ब्यक्तिलाई मधुमेह भएको देखाउन सक्दछ । पिसावको जाँचमा strips प्रयोग गरिन्छ । पिसावमा चिनी भएमा रङ परिवर्तन गर्दछ । व्यक्तिले पिसाव गर्ने बित्तिकै जाँच गर्नुपर्छ । जाँचका लागि भोको बस्नुपर्दैन ।
तर पिसावको जाँच गर्दा मधुमेह छ की छैन पूर्ण थाहा पाईंदैन किनकी पिसावमा चिनीको मात्रा देखाउन रगतमा चिनीको तह धेरै माथि बढ्नुपर्दछ (१० mmol/l अथवा १८० mg/dl) । यदि पिसावको जाँच गर्दा मधुमेह नदेखिएपनि मधुमेह हुने सम्भावना छ भने रगतको जाँच गराउनुपर्छ ।
तपाईंले अहिले सन्चै महशुस गरेपनि मधुमेहले पहिले नै हानी गरिसकेको हुन्छ । तर पनि तपाईंले खाने कुरामा गरेको सानो परिवर्तनले समेत तपाईंलाई स्वस्थ राख्न सक्दछ ।
यदि मधुमेह भएमा के गर्ने ?
मधुमेह भएपछि चिन्ता त लाग्छ नै । (सहायता पाउने उपायहरुका लागि हेर्नुहोस्)। धेरै मानिसहरुले आफूलाई मधुमेह भएको स्विकार्न कठीन हुन्छ । अव बाँकि रहेको जिवनमा ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने रोग छ भन्ने विश्वास गर्न चाहँदैनन् । यस्तो अवस्थामा विरामी भएजस्तो अनुभव भएन भने पनि रगतमा भएको चिनीले शरिरलाई हानी गर्छ । त्यसैले ध्यान दिनुपर्छ । चिन्ता गरेर बस्नुपर्दैन । किनभने आफ्नो हेरबिचार गरेर लामो र स्वस्थकर जीवन विताउन सकिन्छ ।
"http://ne.hesperian.org/w/index.php?title=New_Where_There_Is_No_Doctor:मधुमेहका_लागि_परिक्षण&oldid=173" बाट निकालिएको